ज्ञानेन्द्रको मसला — News of The World
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकमा नेतृत्व नभएकोले आफू तयार भएको बताएपछि आदरणीय पाठकबृन्दलाई के लागेको छ कुन्नी ! कर्केनजरलाई भने ज्ञानेन्द्रप्रति दया पलाएको छ, पाठकबृन्द ।
तिहारको दिन उनकै भाषामा भन्ने हो भने आफन्त र परीवारसँग रमाइलो मानी बस्ने दिन, बैनीसँग टीका लगाएपछि उपस्थित गराएर संचारकर्मीलाई उनले मसलै हुने गरी बोलेछन् । दिपावलीको पावन अवसरमा देशबासीलाई शुभकामना दिदैँ उनले देशकोे पछिल्लो अवस्थाप्रति चासो र चिन्ता जाहेर गरेको बताए । दुबोको माला, मखमली माला र गोदावरी फूलको महत्व नबुझेर कागजको फूलको मालाबाट सुवास खोजेको गम्भीर आरोप समेत दलहरूलाई लगाए । ‘अब नेतृत्व दिने समय आएजस्तो छ’ उनले खुलेरै झनै धक नमानी आफ्नो चाहना व्यक्त गरे । मागेको समय आएजस्तो छ, उनले थप्दै पनि गए ।
तिहारको बेला मिडियाहरूले मसला पाए । यो मसला असला सहितको हो÷होइन, यो कुरो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नै थाहा होला । तर, चुनाव लडेर राष्ट्रपति बन्न पाउने बेलामा ज्ञानेन्द्र सरकारले बढि बोले भनेर कतैबाट पनि आएन गाँठे । अघिल्लो दिन साँझ देउवाले बामगठबन्धनबाट देश अधिनायकवादतर्फ भन्नु, पछिल्लो दिउँसो ज्ञानेन्द्रले ‘नेतृत्व र समय’को कुरा बोल्नुलाई कसैले सामान्य भन्लान् तर यसलाई सामान्य मात्रै नै भन्न मिल्ला र पाठकबृन्द ! त्यस्तै हो भने त ज्ञानेन्द्रले असला बिना मसला बाँडेका हुन् भन्दिए त पुगिहाल्यो नी हैन र ?